60 အဘို့ရလဒ် power rangers
အာဏာကို Rangers နဂါးပြည်ကို
ပါဝါ Rangers Monster ဒီဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့မစ်ရှင် Land သူတို့ကိုဖျက်ဆီးနှင့်လူ့ကာကွယ်ပေးရန်မိကျောင်းပြည်သို့ပါဝါရိန်းဂျားကကူညီရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးကြသည်။
ပါဝါ Rangers Knight
ပါဝါရိန်းဂျားကဒီအလယ်ခေတ်ပြိုင်ပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကူညီပါ, သင်ကွဲပြားခြားနားသော oponent နောက်တဖန်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်နှင့်သင်ကိုရွှေပိုကောင်းပစ္စည်းပစ္စယဝယ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ ထားလက်နက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်သင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပါ
အာဏာကို Rangers အာဏာကိုစီးနင်း
Power က Ranger ပြိုင်ကားဂိမ်း! မြန်သငျသညျမဆိုပြိုင်ဘက်ရှေ့မှာသင့်ကိုကျော်ယူနှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျနိုငျသကဲ့သိုမောင်း။
အ osiris ပဋိပက္ခ
အဖုံးကို အသုံးပြု. နှင့်သင်၏အေးဂျင့် '' အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုအသုံးချပြီး, 25 အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်သင်တို့၏အေးဂျင့်ကိုလမ်းပြ။ သင်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသကဲ့သို့သင်တို့ထို့နောက်သင့်မစ်ရှင်ပေါ်တွင်သင်ကူညီနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက် weaponary ရှာတှေ့နိုငျသောသူဖမ်းမိအေးဂျင့်ကယ်နှုတ်နိုင်။